Tamim-pitiavana hankalaza ny fahombiazan ' ny lamba ny rindrina famolavolana (Shanghai) fihaonana an-tampony forum!-Company News-Nanjing BeiLiDa Vaovao Ny Fitaovana Ny Rafi-Injeniera Co., Ltd.
Mankalazà am-pitiavana ny fahombiazan'ny forum fihaonana amin'ny varavarankely (Shanghai).
Fotoana: 2013-11-22 Hits: 19
Ny fihaonam-baravarankely rindrina (Shanghai) fihaonana an-tampony "famolavolana sy fikarohana momba ny rindrina lamba manara-penitra" izay tohanan'ny vondron-trano maritrano ara-toekarena maoderina Shina momba ny maritrano sy ny ivon-toeram-pikarohana momba ny firafitry ny fikarohana sy ny ivon-tsivana. Varavarana rindrina sy varavarankely manam-pahaizana eo am-baravarankely ary ny tontolon'ny haino aman-javaboary dia nifarana tamim-pahombiazana tamin'ny 16 Novambra 2013 tao amin'ny efitrano siansa.
Ity fihaonambe ity dia manangona ireo manam-pahaizana amin'ny rindrina lamba, arisitra ary mpamorona ao an-trano sy any ivelany mba handinihana lalina momba ny firoboroboan'ny firafitry ny rindrina vita amin'ny rindrina avo lenta. Ny federasiona natrehan'ny olona 500 mahery dia ny fihaonana an-tampony manokana ihany koa any Chine. Amin'ny maha mpiara-mikarakara azy, ny orinasantsika dia nahavita vokatra tsara teo amin'ny sehatry ny fahalalahan'ny orinasa sy ny fianarana talenta.
Nandritra ny fihaonana dia noresahan'ireo mpandray anjara ny fisainan'ny rindrin'ny lay amin'ny fivoarana amin'ny alàlan'ny eritreritra vaovao, ny fomba fijery marobe ary fifampiresahana eo amin'ny sehatra cross, famakafakana lalina ny toe-javatra misy ankehitriny sy ny firoboroboan'ny indostrian'ny rindrina, ary nanome famakafakana tamin'ny antsipiriany avy amin'ny teknolojia ara-pitaovana mifototra amin'ny tranga injeniera manokana. Ny lohahevitra lehibe dia: ary ny fanamboarana tetik'asa maranitra "," Application of Rhino and BIM Software in Complex Shape ", sns. Momba ny maritrano ara-teknika tsy ara-dàlana, nitatitra matetika ny tetikasan'ny orinasa ny famoahana ny lahateny momba ny teknolojia nomerika. Ny Profesora Long Wenzhi avy ao Shina nanangana rindrina fanamboarana rindrina vita amin'ny rindrina vita amin'ny rindrina vita amin'ny rindrina sy fikandrana fikandrana windows, naka ohatra ny Tianjin Port Project an'ny orinasa misy antsika, dia am-panamafisana am-panafarana ny fampiharana ny fitaovam-panorenan'ny rindrina vita amin'ny rindrina vita amin'ny rindrina vita amin'ny rindrina.
Chen Wei, talen'ny teknikan'ny orinasanay, dia tonga mpanangom-bazaha koa ary nanome kabary iray momba ny "GRC hoditra manatsara ny endrika maritrano". Ity kabary ity dia nahasarika olona maro teo amin'ny orinasa mba hitandrina GRC sy belinda.
Ny tatitra dia manasongadina fa GRC, satria fitaovana rindrina mitambatra tsy misy dikany miangona be fampiasa be dia be tamin'ny taonjato faha-21, dia nanjary fitaovana hoditra manana endrika mampiavaka azy tamin'ny vanim-potoana noho ny fanoratana azy amin'ny akorany, ny habetsaky ny habeny lehibe, ny fivondronana azo tsapain-tanana. fanamboarana ara-dalàna sy lalan'ny fiantohana ara-teknika 50 taona, ary koa ny tombany maoderina sy ny teknolojia maoderina ary ny fampiharana azy.
Nandritra ny fihaonana dia nahaliana ny mpanao sary, ny mpikaroka, ny mpikaroka ary ny manamboatra rindrina amin'ny rindrina. Mifanaraka amin'ny maha-zava-dehibe ny fandraisan'ny orinasa amin'ity hetsika ity koa: nanentanany ny belida hanohizany ny fampidinana ny fitaovana sy ny teknolojia vaovao, hanamboatra rafitra rindrina fanakona angovo sy ambany karbonika, hamorona tontolo iainana manara-penitra ary lasa lasa mpanohana ny serivisy fananganana tontolo iainana maitso "E-GRC" lehibe indrindra eran-tany.
Tiako ny misaotra an'ireo mpikarakara amin'ny fanomezana belinda sehatra hanehoana ireo vokatra sy teknolojia vaovao. Mino aho fa ho fantatry ny olona maro kokoa ny karazan'olona rehetra, ny fandraisan'anjara ny rafi-bolan'ny tranoben'ny fananganana, mamorona tontolo tsara tarehy, mitondra ny tontolon'ny GRC ho lasa haavo vaovao, ary ny fanaovana belinda dia kintana vaovao mahavariana amin'ny tontolon'ny rindrina lamba !